Politika: Nohenoina ihany! | Hevitra MPANOHARIANA
Politika: Nohenoina ihany!
2007-04-25 @ 09:23 in Politika
Efa hitantsika amin’ny gazety angamba ny fitokanana ny trano lehibe (fa toa kelikely jerena izy izany an !) natao hamoahana ny didim-pitsarana mikasika ny fifidianana mitranga eto amin’ny firenena. Trano izay naorina eo anilan’ny trano hamantaran’ny be sy ny maro ny Fitsarana Avo Momba ny Lalampanorenana ihany hatramin’izao izany hoe ao anatin’ny faritra sy fefin’ny HCC ihany. Nanandrana nanaraka ihany aho hamantatra hoe mahazaka olona firy moa ity trano mitady hiendrika fiangonana ity fa ny teti-bidiny aloha dia re fa Ar260.000.000 eo ho eo( tena lafo izy izany k'ty!). Azo heverina anefa fa mahazaka ny olona asaina ihany ilay trano saika miendrika fiangonana jerena. Toa trano gasy tsotra ihany no fijery azy fa natao lehibe hahatafiditra olona maromaro fotsiny.
Ny kabarin’ny filoham-pirenena moa no nahalalana fa nivezivezy mitady trano hatrany ny Mpitsara avo isaky ny tonga ny fotoam-pitsarana lehibe. Tsy mba nanana trano manokana ho azy ry zareo nandritra ny 46 taona fa mindrana trano etsy sy eroa (ary ataoko fa tafiditra amin’izany ny teny amin’ny Ermitage tamin’ny taona 2001 – 2002, izany hoe sans domicile fixe ry zareo rehefa fotoan-dehibe ?). Efa fotoana lava no nampiasana hatrany ny trano lehibe fanaovana fivoriana iraisam-pirenena tao amin’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny. Efa nanaovan’ny filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fankasitrahana moa ny fahafoizan’ny manampahefana amin’ireny trano ireny nanaiky amin-kitsim-po ny fampindramana ny trano.
Hatramin’izay ela izay izany dia toa ambinambin-javatra na heverina ho fandaniam-bola amin’ny tsy antony ny resaka fifidianana indrindra fa ny toerana famoahana didim-pitsarana mikasika ity fifidianana ity. Dia hoy aho nampifaly tena hoe : fony izaho nanoratra tany amin’ny Politika fanorona ny andron’ny famoahana ofisialy ny fifidianana ho filoham-pirenena tao angamba no nanorenana malaky ity trano lehibe ity. Nalaiko aloha ny sary anatin’ny Lapan’ny fitsarana Anosy tamin’izay fotoana izay dia nanoratra aho hoe tokony ho tany amin’ity toerana ity no nanaovana ny fotoam-pitsarana fa tsy any amin’ny raharaham-bahiny eo akaiky izany ( raharaham-bahiny hatrany izany hatramin’izay ny fifidianana sa ny firenena vahiny ihany no tena manery hisy fitsarana ?). Nohenoina ihany aho izany !
Fa angaha moa ny amin’iny ihany ? Omaly vao omaly indrindra aho no nanoratra tato ao amin’ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe « Hay va re » fa tahaka ny politika fanenjehana olona manokana no tena ataon’ny sosialista any Frantsa. Mahita ihany koa moa aho amin’ny filazana hoe azo atao ny mametraka minisitra avy amin’ny UDF rehefa lany Ramatoa Segolene Royal dia hoy aho hoe resaka fizaran-tseza sahady moa no ataony tahaka ny manao hoe omeko tombotsoa tahaka izao raha lany aho na hoe koa tombotsoa manko no tena idiranay eo amin’ny fitondrana e ! Dia tahaka ireny hoe mahay mamaky teny malagasy ireny ery Andriamatoa Nicolas Sarkozy ka dia nitovitovy tahaka ny nambarako indrindra ny kabarin-drangahy tany Seine-Maritime halina (tena lasa mpanara-baovao politika frantsay tampoka teo aho izany !). Ny marina kosa angamba dia hoe tsy very loatra ary tsy lavitra loatra amin’ny marina mitranga any Frantsa aho angamba !